Mangaphi amagama ngePosti alungile? | Martech Zone
Mangaphi amagama ngePosti alungile?
NgoLwesine, Novemba 13, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
I-Kudos ukuya kwi-Indy Confluence yokubeka i Umnyhadala omkhulu wonxibelelwano apha e-Indianapolis izolo. Ngokungafaniyo neziganeko zonxibelelwano, i-Indy Confluence ekhokelwa ngu-Brett Healey kunye UErik Deckers, Yaziswa kwiphaneli yabantu apha kwingingqi ukubonelela ngeengcebiso ezongezwe ngexabiso kuwo onke amalungu ayo. Umxholo wale nyanga wawusithi Kutheni ukubhloga kweNkampani kubalulekile kwiMpumelelo yeNkampani kwaye ndiye ndamenywa ukuba ndibekhona kwiqela lenjongo.
Iphaneli yayiqulathe uChris Baggott, URhoda Israelov, URodger Johnson, UKyle Lacy nam.
Yayiyingxoxo entle kodwa isihloko esinye sinamathele kwi-craw yam: Mangaphi amagama ekufuneka iposti yebhlog ibe nawo?.
Incoko ihambe kuyo yonke itafile kwaye uninzi lwezithethi zityhalele izithuba ze-pithy kunye nenani lamagama angama-250 abekwe apho njengelona lilungileyo. Njengeblogger enye 'ende,' ndaye ndavotelwa ngaphandle yiphaneli.
Kubafundi bebhlog yam, uyazi ukuba andinakukwazi nokuseta iposti yebhlog kumagama angama-250 (esi sithuba ngumzekelo omhle). Ndineetoni zabafundi, ukubekwa kweinjini yokukhangela enkulu, kunye nenani elikhulayo lababhalisi- kwaye andisokuze ndibemdaka! Ndihlalutye inani le amagama ngeposi kwaye ndiyithelekise nokuthumela ukuthandwa kwibhlog yam kwaye andikaze ndifumane ulungelelwaniso.
Ngeli xesha, ndithathe isigqibo sokujonga ezinye iibhloko. Ayizizo zonke iibhloko, nangona kunjalo. Ndikhethe iziphumo ezi-5 eziphezulu kuGoogle xa ukhangela Ukubhloga kweSEO. Ndibona nabani na ekupheleni kwelo dabi uya kuba nokuvumelana okuthile kwizithuba zabo ezinokundinika ukuqonda. Iiblogi ezintlanu ezihlalutyiweyo zazikhona I-SEOmoz, SEO kuGoogle, Ibhlog yokuThengisa kwi-Intanethi, Ibhlog yeHittail, kwaye i Ibhlog ye-SEO yemihla ngemihla.
Kuba ezi bhlog zikwisiphumo esiphakamileyo sokukhangela, ndicinga ukuba zombini ziyathandwa kwaye kufanelekile. Ndikhuphe iiposti zebhlog zokugqibela ze-10 kwibhlog nganye zizonke zebhlog ze-50. Le, ayisiyiyo eyokwenzululwazi, kodwa ndiyakholelwa ukuba iziphumo ziphinda into endiyiphikisayo ngexesha lenjongo.
Amagama ngeZiphumo zePosi:
I-SEOmoz ibinomndilili wamagama angama-832.3 ngeposi kunye namagama angama-512.5 kwisithuba ngasinye.
I-SEO kaGoogle ibinama-avareji yamagama angama-349.7 kwisithuba ngasinye esinamagama angama-315 kwisithuba ngasinye.
Izikhundla zeBlogs eziphezulu zazinamagama aphakathi angama-742.5 kwisithuba ngasinye esinamagama angama-744 kwisithuba ngasinye.
I-Hit Tail Blog ibinamagama angama-255 kwisithuba ngasinye esinamagama angama-233 kwisithuba ngasinye.
I-blog ye-SEO yemihla ngemihla ibinamagama aphakathi angama-450.8 ngeposti nganye enamagama angama-507 ngeposi nganye.
Iziphumo zokugqibela zingumndilili we 526 amagama ngeposi kunye nomndilili we 447 amagama ngeposi. Kwizithuba ezingama-50 ezilinganisiweyo (ezili-10 ngebhlog nganye), kuphela zi-6 zazo ezazingaphantsi kwamagama angama-250. Kwixesha elidlulileyo, ndiye ndangqina ukuba ubungakanani beposi abuchaphazelekanga kubhloga kwebhlog yam. Ngoku ndiza kuyithetha kwakhona, ingcebiso endinayo yamagama ngePosi yile:
Inani lamagama owabhalayo ngeposi kufuneka libe linani lamagama awathathayo ukugqibezela injongo ephambili yesithuba. Ndingongeza ukuba inani lamagama kwisithuba ngasinye kufuneka lihambelane noko ukuhlangabezana nolindelo lwabafundi bangoku. Andilibali inani lamagama-ndiyaqinisekisa ukuba umntu othile ufumene iposti yebhlog kwisiphumo sokukhangela ukuba bafumana oko bakuzeleyo.
tags: inani lamagamaisibalo samagama
Iliso linokujonga upelo
Nov 13, 2008 kwi-1: 09 AM
Olu lwazi lutsha kakhulu kum. Bendihlala ndisahlula isihloko kwizithuba ezininzi xa sisiba sikhulu kakhulu kuba andifuni ukuba abafundi bam boyisiswe yimvakalelo eyongameleyo yokurhuqa uloyiko. Ngokwam, andizithandi iisayithi ekufuneka ndiskrole ezantsi kakhulu. Ngapha koko, usandul 'ukuveza izinto ezinomdla apha. Mhlawumbi, kuya kufuneka ndigqibe isihloko kwisithuba esinye nangona kungathatha ngaphezulu kwamagama angama-2500. Enkosi ngokuthumela inqaku elinomdla.
Nov 13, 2008 kwi-9: 41 AM
Ukuba umxholo ubalulekile kwaye kufanelekile, njengowakho, uDoug, ubude abubalulekanga. Kwelinye icala, ukuba ibhlogger iyathetha nje ukuba izive ithetha (ehlala injalo, ngelishwa), yenye into leyo!
Nov 13, 2008 kwi-10: 06 AM
Iposti yebhlog kufuneka ibe namagama amaninzi njengoko kufuneka ukufumana inqaku lakho.
Akhonto yokutsho? Akukho ngongoma = 0 amagama
Mhlawumbi yonke into oyithethayo sisivakalisi. Kodwa isivakalisi esihle ngokwenene! Unokuphelela kwincwadi yeekowuti, ngenxa yecrimminy!
Ibhegi enkulu etyebileyo yomoya, kodwa ibhegi enomdla yomoya = bhala! Yikhuphe. Khupha! Ubomvu! Rave! Ngubani okhathalayo mangaphi amagama ???? Ukuba ikwenza uzive ungcono, yenze! (Oku ngakumbi kungenxa yebhlog engeyoyangcali.)
Abantu BAYA KUFUNDA izithuba ezinde UKUBA iingcinga zomelele ngokwaneleyo ukuba zingatsalela kude… ukuba ukubhala kubi, akukho magama okanye kunqongophala kwamagama anokugcina isithuba.
Nov 13, 2008 kwi-9: 58 AM
Ngaba ayisiyo nto iphambili apha endaweni yenani lamagama? Ukuba unomxholo olungileyo, abantu baya kunxibelelana nawe kwaye ke bakunike igunya kuGoogle, okanye ugcine ingxoxo iphila kumagqabantshintshi kwaye ke unike uGoogle umbono wokuba iwebhusayithi yakho ihlaziywa rhoqo. Kwaye kulula ukuba nomxholo olungileyo onamagama angama-250 nangaphezulu. Okanye ndilahlekelwe yinto?
Nov 14, 2008 kwi-10: 13 AM
Kubantu ababhlogile ngaphambili, ndicinga ukuba le ayisiyongqondo kwaye umxholo uyinkosi. Nangona kunjalo, kwiblogi yokuqala okanye iqumrhu licinga ngokubhloga, lo ngumbuzo oza rhoqo ngenxa yoko kubalulekile ukuba siwuphendule.
Nov 13, 2008 kwi-10: 04 AM
"Inani lamagama owabhalayo kwisithuba ngasinye kufuneka ibe linani lamagama awathathayo ukugqibezela injongo ephambili yesithuba"
Lelona cebiso linengqiqo endakha ndalifunda ngalo mbandela.
(Ewe kunjalo, njengomntu obhala izithuba ezide kunokuba ndithandekile 🙂)
Abafundi beebhloko zam rhoqo bathi bayayithanda indlela yam yokubhala, ke andizukuyitshintsha kuba abanye besithi amagama angama-250 kufanele ukuba abe max (ikwavumela ukudityaniswa okuhle kwamagama aphambili ee-SE nawo).
Izithuba zakho zizele lulwazi olulungileyo kunye nokufundwa okugqwesileyo, ewe ewe, ingcebiso enkulu: sukulandela 'into eyamkelekileyo'; Khangela eyona isebenzayo kuwe uyeke ukubala amagama 🙂
Nov 14, 2008 kwi-8: 08 AM
Ndizamile ngenene ukwenza le ngongoma xa besithetha ngesihloko esikwiqela lenjongo yokuhlangana. Uyenza ngeklasi ENGAKUMBI. 🙂
@Cynthia Yithanda inyani oyithethileyo iRent, Rant, kunye neRave. Ezona zithuba zifundwayo kwibhlog yam kuxa ndihlekisa kwaye ndirhabaxa malunga nento ethile. 🙂
Nov 14, 2008 kwi-10: 16 AM
Zininzi iinkcukacha ezingezizo kweli shishini kwaye akukho mntu unembumbulu yomlingo! UGoogle usandinika iziphumo zophendlo olubi ngamanye amaxesha ngamanye amaxesha ndiyanuka ukufumana iposti ebhalwe kakuhle.
Ndicinga ukuba kubalulekile ukulahla 'izimvo' kunye nedatha ethile ukuze uyibuyisele! Sisafunda.
Mar 5, 2009 ngo-3: 39 AM
Incam entle ye-SEO
Feb 14, 2011 ngo-10: 38 PM
Ulwazi oluhle kakhulu! Enkosi ngokwabelana ngayo.
Okt 19, 2011 ngexesha 8:59 AM
Oktobha 19, 2011 ngo-1: 59 PM
Oktobha 19, 2011 ngo-2: 47 PM
Akukho nto injengokusebenzisa idatha ukulawula ngaphezulu uluvo. Uluvo lwam kwinqaku (ibhlog okanye ngenye indlela) "kukuBhala ngokuLungileyo!" Kungcono ukubhala (igrama, umxholo, ukuhamba ngokulandelelana, njl.) Okukhona ndiza kuyifunda.
Ngomhla wama-2 ku-Disemba 2011 ngo-1: 41 AM
Enkosi ngale posi kuba bendizama ukuyifumana le nto. Uninzi lwezithuba zam zivela kuma-350 ukuya kuma-450 amagama ngeposi. Ndiyazi xa ndisiya kwibhlog kwaye iposti ingaphezulu kwamagama angama-500, ndibaleka ngaphezulu. Andiqondi ukuba uninzi lwabantu luyathanda ukufunda iiblogi ezinde. Ndizama ukufumana inqaku lam ngamagama angaphantsi kwama-500. Mhlawumbi ndiphosakele. Nangona kunjalo, ukucinga kwam nje. USally
Ngomhla wama-4 ku-Disemba 2011 ngo-9: 47 PM
Ngokuqinisekileyo ndiyavuma ukuba abantu bafunda kancinci. Sityhala abathengi bethu ukuba basebenzise amanqaku aneebhulethi, imifanekiso elungileyo, kunye nesibindi / ugxininiso naphi na apho banokuthi babambe khona 'abatyibilikisi'. Ukuba awuguquguquki, ndicinga ukuba kubaluleke ngakumbi… ukuze abantu bakwazi ukulindela into enye kutyelelo ngalunye.
Ngomhla wama-15 ku-Disemba 2011 ngo-1: 25 PM
Kwinyanga ephelileyo kwincoko nabahlobo abaliqela ekhokelwa nguAllison Carter noJeremy Zucker kwagqitywa inani lamagama afanelekileyo kwisithuba ngasinye njengoko usitsho, "Inani lamagama elifunekayo ukugqibezela eyona njongo iphambili."
Meyi 7, 2012 kwi-3: 13 PM
Ndakhangela inombolo yomlingo, ndafumana impendulo eyiyo! Enkosi, matt
Juni 2, 2012 ngo-9: 59 AM
Inani lamagama owabhalayo kwisithuba ngasinye kufuneka ibe linani lamagama awenzileyo ukugcwalisa injongo ephambili yesithuba.
Meyi 1, 2013 kwi-2: 46 PM
Olu luncedo kakhulu. Enkosi. Ngoku andothuki xa ndingabethi amagama angama-600. Ucinga ntoni kwimifanekiso?
Meyi 1, 2013 kwi-3: 35 PM
Imifanekiso ibalulekile! Ayisiyiyo eyokuchaza izihloko ezinzima kodwa yokunceda ekutsaleni abafundi kumxholo wakho kwaye ubancede bawukhumbule. -
Juni 9, 2013 ngo-8: 58 AM
Ulwazi olulungileyo oluluncedo. Ndivile ukuba ngaphezulu kwamagama angama-700 anokubangela ukuba umfundi alahleke. Enkosi ngokubonelela ngamaxwebhu.
Mar 13, 2014 ngo-4: 48 AM
Molo, iposti enkulu, enkosi.
ingaba oku kutshintshile ngokuhamba kwexesha? Kuya kuba ngumdla ukubona idatha yangoku.
Mar 13, 2014 ngo 12:01 PM
Ndiqinisekile ukuba inayo, @ mikemorrison1: disqus, nangona ukubhala kwam kungatshintshanga kangako. Iinjini zokukhangela zinombulelo ngakumbi kwizithuba 'ezijiyileyo' ngoku ezineentlobo ezininzi zemidiya, isicatshulwa esingaphezulu kunye nezinto ezingaphezulu (isicatshulwa esineebhulethi, izihlokwana, njl.
Meyi 16, 2014 kwi-2: 17 PM
Akukho mithetho inzima kwaye ikhawulezayo ukuba lingakanani igama ngeposi elichanekileyo. Oko kuxhomekeke kumxholo weposti, ingakanani iposti ekufuneka ichazwe ngokweenkcukacha. Isithuba sinokuba namacandelo ahlukeneyo ngathi ezinye iiposti zincinci, ziphakathi kwaye zide. Imigangatho efanayo ichaziwe kwesi sithuba ngaba seams banamagama aphakathi angama-832.3 kwisithuba ngasinye benamagama angama-512.5 kwisithuba ngasinye. Ibhlog yetanki ephezulu yayinamagama aphakathi angama-742.5 kwisithuba ngasinye sinamagama angama-744 kwisithuba ngasinye.
Oktobha 12, 2014 ngo-12: 57 PM
ingaba olu lwazi lwangoku?
Oktobha 12, 2014 ngo-1: 17 PM
Asilubuyisanga olu hlalutyo kwiminyaka kodwa inokuba lixesha. Ndiyakholelwa ukuba uGoogle ujonge kakhulu kumaphepha "awomeleleyo" anamagama amaninzi kwiphepha ngalinye kunangaphambili. Izalathiso ziye zaguquguquka ngokwamanqanaba kule minyaka imbalwa idlulileyo. Sizama ukuba namagama angama-250 ubuncinci kwaye sizame ukubetha amagama angama-500 ukuya kwali-1000 ngezithuba esizama ukuzibeka kuzo.